Weerar lagu qaaday Al-shabaab oo lagu furtay Hub iyo Agab Militeri (Warbixin) | TOP NEWS
Weerar lagu qaaday Al-shabaab oo lagu furtay Hub iyo Agab Militeri (Warbixin)
By Tifaftiraha Somalida Maanta on December 10, 2016 No Comment
Illaa toddobo dagaal-yahan oo al-Shabaab ah ayaa lugu soo qabtay howlgal gaar ah oo ay ciidamada Jubbaland iyo kuwa Midowga Afrika ka fuliyeen deegaan ku yaalla dhinaca waqooyi galbeed ee magaalada Kismaayo.
Waxaa la sheegay ciidamada inay beegsadeen goobo ay ku sugnaayeen dagaallamayaal ka tirsan al-Shabaab,waxaa kolo howlgalka lugu bur-buriyay saldhig lugu sameyn jiray waxyaabaha qarxa,sida ku cad war ka soo baxay AMISOM.
AMISOM waxay kale oo ay ku sheegtay barteeda twitter-ka inay la wareegeen hub isugu jira rasaas iyo hub kaleba.
Docda kale,war ka soo baxay ururka al-Shabaab ayaa lugu sheegay in weerarkaasi ay soo qaadeen ciidamo iskugu jira Kenyan iyo Maraykan, islamarkaana ay khasaare gaarsiiyeen sida ay sheegeen maleeshiyada al-Shabaab.
Al-Shabab ayaa sheegatay in miino lagu aasay dhulka ay burburisay baabuur nooca beebaha ah.
Ilaa hadda ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta khasaaraha ka dhashay iska horimaadka maanta dhacay.
Weerarrada lugu beegsanayo al-Shabaab ee ka dhaca koonfurta Soomaaliya ayaa siyaaday tan iyo bilowgii sanadka hadda gaba-gabada ah.
Weerar lagu qaaday Al-shabaab oo lagu furtay Hub iyo Agab Militeri (Warbixin) added by Tifaftiraha Somalida Maanta on December 10, 2016